Ukucwaninga – AMANDLA!
Tag archives: Ukucwaninga
Umlando Ogqamile we-Sastri College
Ezindaweni ezisemaphethelweni e-Greyville kukhona i-Sastri College, esinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu esifundazweni nasemlandweni. Isungulwe ngo-1929 njengesikole samabanga aphansi sabafana, kanye nesikhungo sokuqeqesha othisha, kule minyaka edlule ikolishi lenze imisebenzi ehlukahlukene. Imithetho kahulumeni wobandlululo yayiminingi, ivame ukudida futhi ingakaze yaqondakala, yaklanywa njengoba yayisemizamweni ongenaziqhamo zokwenza ukuhleleka ngaphakathi kohlelo olungelona olwemvelo lokubandlululwa. Ngenkathi umthetho wokuqala osemthethweni olawula ukuhlukaniswa …
Continue reading “Umlando Ogqamile we-Sastri College”
Posted byAmandla Durban January 4, 2021 January 4, 2021 Posted inImportant People and SitesTags: Imithetho Yobandlululo, Ubandlululo, UkucwaningaLeave a comment on Umlando Ogqamile we-Sastri College